Nzira yekugadzira sei zvakamanikidzwa profile ye backlink?
Pane zvakawanda zvisiri izvo mune imwe sangano rekuvaka chivako izvo zvisinganyanyogadziriswa kumakambani ekudhinda. Hazvina mhosva kuti makore akawanda ane ruzivo runei munharaunda ino, hauzombozivi zvakajeka kuti Google inogamuchira sei nzvimbo yako uye izvo zvinotsvaga izvi zvingaita sei munguva inotevera. Vashandi veGoogle chete uye webmasters vanogona kuzviziva zvechokwadi. Isu tinofanira kungoshandisa chero dhenda yatinayo uye ruzivo rwedu kutungamira nzvimbo yedu yekutsvaga.
Pane mazwi akawanda anowanzogara uye maonero matsva pamusoro pemashoko ekudzokera shure uye kumashure. Ngatitaurirei zvakanyanya kune avo:
"Rel = nofollow" mitsara haibatsiri chero kukosha chero kupi zvako
"Rel = nofollow" ibasa rer backlink rinotaurira kutsvaga bots hukama uye usapfuuri chero ruzivo rwejisi kuburikidza navo. Pane zvakawanda zvekukakavadzana pamusoro pekukosha kwezvikwata zvinotevera. Vamwe webmasters vanoti hapana chikonzero chekuumba hukama hwakadaro, asi vamwe vanopikisa kuti kukosha kwekutevera backlink kunogona kuderedzwa. Pfungwa dzangu, hapana mhinduro yakajeka yemubvunzo uyu sezvo kukosha kwavo kunogona kuvimba. Izvi zvinowirirana zvakanyanya hazviiti sezvikamu zvakasiyana. Somuenzaniso, kana tikatanga webhusaiti uye tichigadzirisa nehuwandu hwehutano hwe "nofollow" PR. Somugumisiro, iwe haugoni kuona kubuda kamwe kamwe mumigwagwa yemigwagwa. Ndinofungidzira kuti Google inoita basa rakanaka rekunzwisisa "nhafollow" link panyaya yacho.
Zvisinei, zvakakosha kutaurwa dzimwe nzvimbo umo mhando dzisingaverenge dzinobatsira zvikuru panzvimbo yepaiti uye hukuru hwehutano hwewebhu. Iyi nzvimbo dzinosanganisira mawebsite, ma-backlink profiles anosanganisira "nofollow" mazano uye apo magwaro anchor akanyatsogadziriswa. Zvose izvi zvinotevera zvinoshamisa zvisati zvaitika kumashure. Inogona kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvakadai semabasa epamende kana mapurogiramu akabatanidzwa.
Ndakashandisa nherera shure kumashure kwangu, ndichiedza kuvabvisa kubva pamhando yepamusoro yewebhu mabhii nenzira yemashoko e blog, mazano, mapeji ekugadzirisa uye mamwe mazano ekugadzira mazano. Somugumisiro, ini ndakagadzirisa maitiro akaenzana nehuti "rel = nofollow. "Izvi zvakabatanidzwa zvinowedzera kuwedzera kwe100% mu keyword rankings.
Ndicho chikonzero ndinogona kutaura kuti nofollow backlinks inogona kuunza kukosha pawebsite yako. Zvisinei, zvinokosha kuti vakawana sei. Quality organic nofollow backlinks yakanyatsoshanda kushandisa kuenzaniswa kwehutano hwakanyatsogadziriswa.
Dai wakandibvunza mubvunzo uyu mushure mekupedzisira kweGoogle Penguin update, ndingadai ndakatarisa kwauri zvinonakidza sezvakaitika panguva iyo munhu wese aingotarisa hutano hwakakosha. Zvisinei, nekufamba kwenguva, kusimbiswa kwakashandurwa. Mazuva ano, mawebsite akawanda ari kubuda kune dzimwe nzvimbo dzehutaneti kunyange zvazvo dzine zvishoma zvehutano hwehutano uye dzinongova nehuwandu hwemashoko epamamera kubva pamapeji ekutaurira. Ndicho chikonzero masayiti nechekare backlinks angave nechepamusoro kune mamwe ane mashomanana ehutano huri mukati. Mumakore apfuura, taona kuwirirana kukuru pamwe nenhamba ye backlinks, kwete kungofanana navo, inokanganisa vatambi vemakambani makuru pane zvikwata zve TOP.
Zvakare, zvinogona kunge zvisinganzwisisiki, asi zvakadaro, kuva nehuwandu hwemasangano kubva kune imwe nzvimbo inogona kukubatsira iwe, uye Google kunyange inofarira. Iwe hausi pangozi yekuwana mubairo uye kunyange unogona kubatsirwa nayo. Uyezve, nhamba yose yekunze kumashure inogona kupa maitiro ako SEO sezvo iri huru yekubatanidza hutano. VaWebmasters vanodanawo chivako chekuvaka zviitiko "link velocity Source . "